Nahita an'i Ryanair ny Skycop ary nandresy ny mpandeha tany Litoania
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Nahita an'i Ryanair ny Skycop ary nandresy ny mpandeha tany Litoania
Uanilvinas miorina any Litoania Alekna, talen'ny media sosialy ao amin'ny Skycop dia faly. hoy izy eTurboNews fa ny 23 Desambra dia tokony homarihina ho toy ny andro nandefasan'ny fahamarinana fanomezana Krismasy ho an'ireo mpandeha an'habakabaka any Litoania. Mahatsapa izy fa nomena ny mpandeha an'habakabaka ny fahamarinana rehefa Ryanair dia resy tamin'ny fanoherana ireo fepetra sy fepetra tsy ara-drariny
Manazava an'i S izykycop dia nanomboka ny iraka mba hahazoana antoka fa ny mpandeha tsirairay, izay misy fanemorana ny sidina, fanafoanana na famandrihana diso tafahoatra, dia mahazo ny tambiny avy amin'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka. Ekipa matihanina efa voaofana tsara manana traikefa 10+ taona amin'ny asa fiaramanidina, ara-dalàna ary ara-bola no eto hanampy anao handray tambin-karama amin'ny mpandeha fiaramanidina amin'ny fomba haingana sy haingana indrindra.
Skycops ny mpisolovava Nerijus Zaleckas dia efa nanolotra serivisy ara-dalàna nanomboka tamin'ny 2007. Manana mari-pahaizana telo avy any Vilnius, Amsterdam, ary London izy, ary traikefa avy amin'ireo orinasan-dalàna iraisam-pirenena.
Nerijus sy ireo mpiara-miasa aminy dia manome serivisy orinasa, varotra, fanaraha-maso, antitrust ary fanenjehana ho an'ny mpanjifa eo an-toerana sy iraisam-pirenena indrindra any amin'ny faritra Baltika, EU, Belarus, Ukraine ary Russia.
Tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity dia nanaiky ny fitsarana litoanianina fa tsy afaka mandrara ny mpandeha azy i Ryanair hametraka fangatahana araka ny lalàna 261/2004 ho an'ny antoko fahatelo.
“Ny mpandeha dia tsy mila mametraka fitakiana mivantana any amin'ny Ryanair mamela ny Skycop sy ny solontena ara-dalàna hisolo tena ny fahalianan'ny mpandeha an'i Ryanair. "Malalaka ihany koa ny mpandeha hanaiky ny fifanarahana ara-bola sy hafa amin'ny antoko fahatelo manampy azy ireo hahazo ny onitra", hoy ny fitsarana.
Amin'ity tranga ity izay dinihina dia tsy nametraka fitoriana mivantana tamin'i Ryanair ireo mpandeha ary tsy niandry 28 andro ny valintenin'i Ryanair satria voalaza fa misy ny fepetra sy fitsipika mifehy an'i Ryanair.
Rehefa nanome ny zony sy ny takian'izy ireo ity mpandeha ity dia lasa tompon'ny fitakiana i Skycop. Nandà tsy handoa i Ryanair izay milaza fa tsy maintsy mametraka mivantana ny fangatahana ireo mpandeha ary miandry mandritra ny 28 andro, ary tsy afaka manome ny zon'izy ireo amin'ny onitra.
Nanapakevitra ny fitsarana fa manan-kery ny fifanarahana napetraka ary i Ryanair dia mety tsy mandrara ny mpandeha tsy hanome ny zon'izy ireo tambiny raha mino ny mpandeha fa amin'ny fomba toy izany dia hampiharina haingana sy mora kokoa ny zon'izy ireo.
Nanampy ny fitsarana hoe: "Ny fepetra sy ny fepetra famerana an'i Ryanair dia tsy rariny ary foana ary foana. Noho izany, ny mpandeha dia mety manao fehin-kevitra momba ny Fanendrena ary tsy mila mametraka fitakiana ny tenany. ”
"Nanamafy ny fitsarana fa mandika ny zon'ny mpanjifa toy izany ny Fepetra sy ny fepetra Ryanair," hoy i Nerijus Zaleckas.
Ny fitsarana koa dia nanambara fa amin'ny fametrahana ny fangatahana amin'ny alàlan'ny mailaka Skycop dia nahatanteraka ny fepetra rehetra amin'ny fandoavana onitra ary voatery mandoa i Ryanair. Midika izany fa ny orinasa mitaky fitakiana toa ny Skycop dia tsy mila mampiasa ny velaran-taratasin-taratasin'i Ryanair satria tsy natao ho an'ny orinasa toa izany akory.
Antenaina fa mety hampiakatra fitsarana ambony i Ryanair.
Nivoaka ny didim-pitsarana taorian'io fitsarana io ihany dia namoaka onitra 5000 EUR tamin'i Ryanair noho ny fitondran-tena tsy rariny nataony tany amin'ny fitsarana. Ryanair dia nanandrana nanemotra ny fotoam-pitsarana tsy tapaka ary tamin'ny fomba rehetra.
Dusit hanokatra hotely roa vaovao any Shina
Fiaramanidina mpandeha miaraka amina olona 100 no nianjera tamina tranobe misy rihana roa